Ijikọta zọ Mụbaa Ntinye Aka Gị Email | Martech Zone
Email agbapụtawo onwe ya n'ahịa kemgbe mmalite nke ikpo okwu. Ebe “ozi elektrọnik” gosipụtara n’ezi ozi nzi ozi n’oge n’ụdị na n’ọrụ, ngosipụta nke ikpo okwu pụtara na ozi ọ bụla kwesịrị ịbụ nke aka ya, na-eme mgbanwe ma na-emetụta ọtụtụ ndị na-ege ntị.
This year, marketers need to stop considering email technologies and tactics as standalone tools, but rather as parts of a much larger, engaging puzzle. Doing so will allow marketers to get creative, innovative and smart with their email approaches. Here are a few tactics you may be familiar with and how to combine them for greater engagement.
Na ijikọta ọdịnaya dị omimi na mega jikọrọ ọnụ
Mgbe ị lụrụ di na nwunye, mega jikota na ngosipụta ọdịnaya dị ike bụ di na nwunye dị ike. N'iji mega jikota na ngosipụta ọdịnaya di ike, ndị na-ere ahịa email nwere ike ịmepụta ozi email ahaziri iche maka ndebanye aha ọ bụla. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ.
Mega jikota - Iji mega jikota, ndị ahịa nwere ike ịdọrọ ozi igwe mmadụ na akụkọ ihe mere eme na ọdịnaya email. Anyị achọpụtala na ọ na - akpọkarị aha ndị na - ere ahịa, email na - aga nke ọma. “Ezigbo [aha]” ezughị ezu. Na mega jikota, ndị na - ere ahịa nwere ike hazie aha, ọnọdụ ma ọ bụ njirimara igwe mmadụ ndị ọzọ iji hazie email na-akpaghị aka. Nke a nwere abamuru ọzọ nke iduzi anya ndị na - agụ ya ebe ịchọrọ ka ha site na aha onye na - agụ ya ma ọ bụ ozi ndị ọzọ ejikọtara.
Ihe ngosi ọdịnaya di omimi - Ihe omuma ahia nke ndi mmadu meputara site na mege me ka enwere ike itinye ya na ozi email ma choro ya na ndi ozo nke email. Dị ka aha ahụ pụtara, ọdịnaya dị ike na-agbanwe dabere na ndenye. Vidiyo ma ọ bụ ihe nkiri slide na-aga nke ọma na-etinye ozi jikọrọ ọnụ.
Dịka ọmụmaatụ, na nnukwu ụlọ ọrụ nnabata ọbịa n'oge na-adịbeghị anya Afọ Nyocha email, ụlọ ọrụ ahụ wetara aha ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ, ọtụtụ ụlọ nkwari akụ - na ọnọdụ - ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ a kapịrị ọnụ nọrọ, tinyere ụlọ nkwari akụ na ebe ndị a tụrụ aro na-adabere n'akụkọ ihe mere eme. The mega merged ọdịnaya gbanwere dabere na adreesị ozi-e. Yabụ na ọ nweghị mmadụ abụọ natara otu email ahụ - onye nwere ụgwọ ọrụ ọ bụla natara vidiyo pụrụ iche ahaziri nke onwe ha.
Ejikọtara isi ihe ndị ọzọ
Emailre ahịa email anaghị akwụsị site na ịlụ di na nwunye nke mejupụtara na ọdịnaya nwere ike. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịkwalite ahịa email ha site na ijikọta usoro ọdịnala na teknụzụ ọhụụ.
Nhazi ngwakọ ngwongwo nke nwere ike - Ozi ịntanetị kachasị dị irè ga-ekwe ka ọdịnaya megharịa ebe onye na-azụ ahịa ga-emepe email (ekwentị, desktọọpụ, wdg), ma nwee ọnụọgụ pịa-na-emeghe ọnụego 21. Mana mmeghachi omume na-eme ihe abụghị ihe ọhụụ na ndị na-ere ahịa nwere ike iburu ya na-aga n'ihu okirikiri nhọrọ ukwuu ngwakọ mobile nke ahụ na-enye otu nhazi maka nnukwu na obere enyo. Akụkụ kachasị mma maka nhazi? Ọ nwere ike ịgụ pasent 100 ma ọ chọghị ka ndị ọrụ mbugharị ma ọ bụ tuo. N'ikpeazụ, nke a na-eme imezi emezi.
Ihe ederede banyere ọha - Email dị mma, mana ọ dị ike mgbe ejikọtara ya na mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị na-ere ahịa nwere ike ibuli mgbalị email ha site na itinye n'ọrụ edemede mmekọrịta - ọdịnaya mmekọrịta (dịka tweets, foto ma ọ bụ nkwupụta) nke adọtara ozugbo n'ime ozi email. Nke a na-enye mmelite nke oge nke mmeghachi omume ndị ahịa na ụdị, ma ọ bụ ụzọ dị mma iji tinye ndị na-ege ntị email.
Site na itinye ihe omuma ndi mmadu na email, udiri nwere ike gbaa ndi debanyere aha aka ka ha kesaa ahia, nke a gha enyere ndi ahia aka ichota ndi na-akwado ha ma mezie ihe ndi ha ga-eme n'ọdịnihu.
100 percent ogugu na oyiyi anya - N’afọ gara aga, Google chọpụtara na oyiyi igbochi mmetụta 43 pasent nke ozi ịntanetị, na-ama ndi ahia aka igwa ndi na-eri ahia okwu ngwa ngwa na imebi nlele nke email. Agbanyeghị, itinye ihe onyonyo na ọdịnaya na teknụzụ ọhụụ na-enye ndị ụdị ohere ijikọ na ndị ahịa ha, agbanyeghị ntọala email ha.
Otu narị pasent nwere ike ịgụ na ihe oyiyi na-eme ka o doo anya na ederede ederede niile ma nwee ike ịgụta ya, ma ejiri ihe oyiyi rụọ ma ọ bụ na ọ bụghị, na-enye ụdị ohere iji ozi ịntanetị ha nwee mmetụta dị ukwuu ma na-ekwupụta ozi ha n'ụzọ mmetụta.
Nnyapade ọdịnaya - Ozi nkwalite na ire ere dị mkpa iji nwekwuo ego, mana ọ dị ike mgbe ejikọtara ya na ọdịnaya nnyapade - izi ozi dabere na ọdịnaya nke anaghị erere onye debanyere aha, kama ọ na-anapụta ozi na-atọ ụtọ ma dị mkpa (ajụjụ, ndụmọdụ, wdg). Typedị ọdịnaya a enwekwu email mepere site na 12-24 percent.
Ndị ahịa anaghị anọ n'ọnọdụ ịzụta, ya mere, anaghị achọ ozi-e nkwado. Site na ịhazi ozi ịntanetị dabere na ndụ ndụ nke ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa nwere ike idobe ụfọdụ ngalaba aka ruo mgbe ha dị njikere ịzụta ọzọ.
Nnukwu mgbasa ozi ịre ahịa email kwesịrị ịnye nsonaazụ dị ka ịpị akawanye, mmeghe na ịzụrụ ihe. Na ijikọta teknụzụ na usoro, ndị na - ere ahịa email nwere ike izipu ozi ga - aga nke ọma karịa ịgafe ebumnuche ahịa ha. Iji hụ ụfọdụ n'ime ụdị mgbasa ozi email kachasị ọhụrụ, lelee afọ a Email Design Designbook si Yesmail.
Tags: ike ọdịnayantinye aka na emailemail oyiyi alt mkpadoihe oyiyi emailemail Marketingemail na-elekọta mmadụNhazi ngwakọoyiyi igbochimega jikotaokirikiri nhọrọ ukwuuokirikiri nhọrọ ukwuuemeghe ọnụegoOkirikiri nhọrọ ukwuu emailedemede mmekọrịtannyapade ọdịnayaeee